कर्णालीमा थप सचेतना आवश्यक, परिक्षण व्यापक गरौं र सजग रहौं ! – HostKhabar ::
कर्णालीमा थप सचेतना आवश्यक, परिक्षण व्यापक गरौं र सजग रहौं !
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास बढेपछि बैसाख २९ गतेदेखि प्रदेशका गाउँगाउँमा तथा २७ वटा स्थानीय तहमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली खटाएको छ । गत बैसाख २३ गते सोमबार राती १२ बजेदेखि कर्णाली प्रदेश नै सिल गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले अति दुर्गम र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका ७१८ वडामा स्वास्थ्यकर्मी खटाएको जनाएको छ भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले हुम्ला र जुम्लाका ८ वटा स्थानीय तहमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पठाएको छ।
अहिले प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) जुम्ला र प्रदेश अस्पताल सुर्खेत गरी कर्णालीका २ ठाँउबाट कोरोनाको नमूना परिक्षण गरिन्छ । सुर्खेतमा ठुलो १ र पोर्टेबल १ गरी २ वटा पिसिआर मेशीन रहेको छ भने जुम्लामा १ वटा छ । पिसिआर मेशीनमा जाँच हुन स्वाव संकलनमा प्रयोग हुने किट अभाव रहेको कुरा बारम्बार आइरहेको छ र यो बारेमा प्रदेश सरकार संवेदशील हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशभर झण्डै २ सयको हाराहारीमा डाक्टरहरु छन् भने १७ वटा आईसीयू र ११ वटामात्रै भेन्टिलेटर रहेका छन् ।
हालसम्म कर्णालीमा ४ हजार ७ सय ५३ बेड क्षमताको क्वारेन्टिइन र ४ सय ५७ बेडको आइसोलेसन छ जुन आपतकालिन परिस्थितीमा पर्याप्त होइन । कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका प्रयोगशाला संयोजक ओम आचार्यका अनुसार स्वाव संकलनका लागि प्रयोग हुने आरएन एक्सटेक्सन किट अहिले उपलव्ध छ । प्रदेश अस्पतालबाट आज सम्म ८ सय बढिको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ जसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।
तर, समग्र देशको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा आज एकै दिन ५७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै देशभर संक्रमितको संख्या १९१ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ४ जना वीरगञ्जका पत्रकार र १ जना कपिलवस्तुकी स्टाफ नर्समा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । दिनानुदिन नेपालमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
अर्कोतिर सुर्खेत संग जोडिएको बाँकेमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या देखिएपछि कर्णाली थप सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । चारैतिर कोरोना संक्रमित देखा परेका बेला कर्णालीमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन् । हामी कामना गरौं केही समय अघि उद्धारका नाममा स्वास्थ्य उपचार र परिक्षण नगराई गाउँ गाउँमा पुगेकाहरुमा पनि कोरोना नभेटियोस ।
अव कर्णालीमा थप कडाईका साथ सिल गर्ने कार्यलाई यथावत राखिनुपर्दछ र लकडाउनलाई कडा रुपमा पालना गर्नु सवै नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । कम्जोर आर्थिक अवस्था, पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति अभावका बिच हामीले लकडाउन र नाका सिल गर्नु तथा यसैलाई निरन्तरता दिनुको बिकल्प छैन । यस तर्पm प्रदेश सरकार संवेदनशील र सचेत भएर लागोस् । अर्कोतिर पिसिआर परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाई गाँउ गाँउमा पुगेर परिक्षण गरौं । यही नै अहिलेको लागि कर्णालीलाई सुरक्षित बनाउने एकमात्र संजिबनी बुटि हो ।
नेता गगन थापाले भने, कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व बदल्नुपर्छ
एमालेको महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रको कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेन
योगेश भट्टराईले भने,अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन्छ
एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आजदेखि बन्द सत्र सुरु हुँदै
एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने, नयाँ नक्सामा समेटिएको जमिन फिर्ता भएपछि मात्रै आत्मसम्मान मिल्छ